राप्रपा महाधिवेशनः अध्यक्ष पदका आकाङ्क्षीले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा के भने - BBC News नेपाली
राप्रपा महाधिवेशनः अध्यक्ष पदका आकाङ्क्षीले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा के भने
१ डिसेम्बर २०२१
तस्बिर स्रोत, SCREENGRAB/FACEBOOK
काठमाण्डूमा सुरु भएको मङ्सिर १७ गतेसम्म चल्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको छ।
नेतृत्वमा दोहोरिन चाहेका कमल थापाले पूर्व महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने विवरणहरू आएका छन्।
अध्यक्षद्वय पशुपतिशम्शेर जबरा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने उम्मेदवार नबन्ने बताउँदै आएका छन्।
राप्रपा र राप्रपा संयुक्तबीच भएको एकता पश्चात् पार्टीको यो पहिलो महाधिवेशन हो।
राप्रपाले महाधिवेशनमा चार हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको बताइएको छ।
के नेपालमा राजतन्त्र फर्कन सक्छ?
'राजारानी' छापिएको टीशर्ट बाँडेर सुरु भएको राजावादी आन्दोलन कसरी देशभरि फैलियो?
महाधिवेशन प्रतिनिधिले १४९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्नेछन्।
बाँकी ५० जनालाई अध्यक्षले मनोनयन गर्न पाउने छन्।
काठमाण्डूको भृकुटीमण्डपमा भएको उद्घाटन सत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका आमन्त्रित नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए।
उद्घाटन सत्रमा थापाले के भने?
राप्रपा अध्यक्ष थापाले यो पार्टीको अन्तिम एकता महाधिवेशन हुने र यसले पार्टीको वैचारिक कार्यदिशाको निर्धारण गर्ने बताए।
त्यसका लागि उनले नेतृत्व चयन पनि सर्वसम्मतिका आधारमा तय गर्ने प्रयासका लागि आह्वान गरेका थिए।
''सहमतिबाट हामीले नेतृत्व छनोट गर्न सकेनौँ भने पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास र विधिबाट नेतृत्व छानेर पार्टीलाई आगामी दिनमा एकताबद्ध ढङ्गबाट अघि बढाउने तपाईँ हामी सबैले प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ'' उनले भने।
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताएका नेता लिङ्गदेनतर्फ सङ्केत गर्दै थापाले थपे, ''कुनै पनि बहानामा हामीले, नयाँ-पुरानो, अग्लो-होचो वा अन्य कुनै पनि बहानामा विभाजनको रेखा कोर्न हुँदैन।''
राजसंस्थाको पक्षमा भइरहेका प्रदर्शनबारे सामाजिक सञ्जालमा देखिएका मत
राजा ज्ञानेन्द्रको भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहसँगको त्यो 'कटुतापूर्ण' भेटवार्ता
"२०६३ साल पछि नेपाललाई नयाँ बाटोबाट अघि बढाउने प्रयास गरिएको भए पनि जुन गन्तव्यमा पुग्नका लागि हिन्दु राज्यको पहिचान समाप्त गरेर धर्म निरपेक्ष, राजसंस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र अनि एकात्मक राज्य प्रणालीलाई समाप्त गरेर सङ्घीयता कायम गरियो देश अहिले त्यसको ठिक विपरीत आइपुगेको" पनि थापाले टिप्पणी गरे।
'पुरानो व्यवस्थामा फर्कन खोजेको छैन'
त्यस्तो भन्दै गर्दा राप्रपा पुरानो व्यवस्थामा फर्कन भने नखोजेको उनले बताए। ''राप्रपाले सबै नेपाली अटाउने मौलिक प्रजातन्त्र, राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणालीको निर्माण गरौँ भनेको हो,''थापाले भने।
राप्रपाले आफ्ना राजनीतिक मान्यताहरू स्थापित गर्नका लागि पार्टीले सदन र सडक दुबैलाई प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा थापाले व्यक्त गरे। दुवै शक्ति प्रयोग गरेर हिन्दु राज्य र राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्ने रणनीति पार्टीले लिनुपर्ने उनले बताए।
फेरि एकजुट भएका 'पूर्व पञ्च'को एकताको नयाँ आधार यस्तो छ
राप्रपा फुट: विरोधाभास र विरासतको खेल
''त्यसैले राप्रपाको अहिलेको नारा भनेको राजा आऊ देश बचाउ हैन। हाम्रो नारा, हाम्रो रणनीति भनेको जनता आऊ राजालाई ल्याऊ भन्ने नारा हो,'' उनले भने।
तीन टुक्रामा विभाजित पार्टीलाई एकता गरी महाधिवेशनसम्म पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै थापाले चार वर्ष धैर्य गर्न आग्रह गर्दै सबै मिलेर बलियो पार्टी बनाए पछि आफू युवा पुस्तालाई पार्टी हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताए।
लिङ्देनको भनाइ के रह्यो?
थापा भन्दा अगाडी उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गरेका नेता लिङ्देनले पछिल्लो समय राप्रपामा आवश्यक गतिविधि हुन नसकेको बताउँदै पार्टी नेतृत्व परिवर्तनमा जोड दिएका थिए।
आफ्नो दलको एजेन्डा लोकप्रिय भए पनि पार्टी प्रभावकारी रूपमा देखिन नसकेको असन्तुष्टि उनले पोखे।
''पार्टी एकीकरण घोषणा सभामा मैले भनेको थिए कि तपाईँहरूका निमित्त (पार्टी अध्यक्षहरूलाई) सच्चिने र सच्चाउने अन्तिम मौका हो भनेर। तर यो दुई वर्षको पार्टीको गति हेर्दा, पार्टीको चल्ने शैली हेर्दाखेरि अब यो पार्टी यही ढङ्गले यही कार्यशैलीबाट अगाडी बढ्ने हो भने के हुन्छ सबैलाई थाहा छ,'' उनले भने।
अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन चाहेका नेता थापालाई लिङ्देनको आग्रह थियो, ''समयको पदचापलाई बुझ्नुस्। समयको पदचापलाई बुझेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँहरू अघि बढ्ने बाटो खोलिदिनुस्। ''
टोङ्गामा ज्वालामुखी विस्फोटनपछि सञ्चार सञ्जालमा अवरोध, क्षतिको अवस्था अझै अस्पष्ट
प्रदेश नं २ को नाम मधेश, राजधानी जनकपुरधाम
१७ जनवरी २०२२
कोभिड खोपको बूस्टर डोज दिन सुरु, तर व्यवस्थापनमा अझै समस्या
'हामी चार दाजुभाइले एउटै पत्नी अपनायौँ, हाम्रा छोराहरूले मानेनन्'
चीन र ताइवानबीच कसरी बढ्यो तनाव, युद्ध भयो भने के हुन्छ
घरमै कोभिड परीक्षण गर्न एन्टिजन किट, बजारमा उपलब्ध सामान कति भरपर्दा
भिडिओ, चङ्गासँगै मान्छे पनि उडेर आकाशमा पुगेपछि..., समयावधि 1,12
डार्कनेटमा लागुपदार्थ बेच्ने व्यापारी किन प्रहरीसँग डराउँदैनन्
भिडिओ, के मानिसहरू भविष्यमा काम गर्न जाँदा उड्ने कार चढ्लान्, समयावधि 1,21
दैनिक औसत पाँच घण्टा मोबाइलमा: कुन एपको प्रयोग बढ्यो
१३ जनवरी २०२२
न्यायाधीश बन्ने सपना देखेका स्नातकले दिए ड्राइभरका लागि आवेदन
के उत्तर प्रदेशमा मोदीको दल भाजपामा विद्रोह बढ्न थालेको हो
कोभिड खोपको बूस्टर डोज दिन सुरु; तर व्यवस्थापनमा अझै समस्या
कोभिड महामारीका बेला विश्वका १० धनी व्यक्तिको कुल सम्पत्ति 'दोबर'